Umunwe - Ifilimu Ehlanganisiwe Ibhekene Plywood Factory | I-China Finger - Ifilimu Ehlanganisiwe Ebhekene Nabakhiqizi BasePlywood Nabaphakeli
Ifilimu elihlanganiswe ngomunwe libhekene ne-plywood brown-SULONG
Ipulangwe elingasheleli le-Sulong likhiqizwa ngesisekelo sepulangwe lethu langaphandle le-birch. Ukuqina, ukubekezelelana okuqinile nokuqina kwetape kwenza le plywood eyisisekelo ithandwa kakhulu. Njengomhlinzeki weplywood eliphakeme elingasheleli, uSulong uqinisekisa ukuthi okokusebenza kunokushibilika okuphezulu, ukugoqa okuncane (ukuhlolwa kokugoqa) nokumelana nokugqoka okuphezulu (ukuhlolwa kweTaber). Ngenxa yokuthi i-veneer ifakwe ifilimu, kuphela ukukhubazeka kokuhlanza okubhekwa lapho kubhalwa. Ngaphezu kwalokho, i-defec esobala ...
I-Fixed Competitive Price Marine Plywood Waterproof - Ifilimu elihlanganiswe ngomunwe libhekene neplywood elibomvu - SULONG
Umsebenzi osindayo-Le plywood engasindi futhi enamanani aphansi inikezela ukuqina okuvelele, ukuqina nokuqina kwazo zonke izidingo zakho zezinkuni. Ubuso bayo buhlinzeka ngamandla amakhulu okubamba iglu nezikulufo. I-Plywood-Ipulangwe lenkampani laziwa ngamandla alo, ukuqina nobuhle balo, futhi lithandwa ngabasebenza ngamapulangwe emhlabeni wonke. Yenziwe ngendlela yakamuva yokukhiqiza izinkuni, eqinile futhi eqinile, akulula ukugqoka. Ihambisana nawo ngamaroli kweqa futhi laser cutting imishini-de ...
Ikhwalithi Ephezulu Yekhwalithi Ephezulu Ye-Okoume Marine Ibanga - I-Negative-grain Anti-slip Film Plywood Ebhekene nayo - SULONG
Ipulangwe le-Anti-slip (F / W) lingasetshenziswa phansi kwetrailer, amaloli, nezimoto zesitimela. Ngaphezu komkhakha wezokuthutha, imikhiqizo yethu ekhethekile enendawo engagudluki nayo isetshenziselwa ukwakha izinqolobane, ukulayishwa nokulayishwa kwamapulatifomu, ukufakwa kwesikafula, kanye nezitezi zokudlala. I-anti-slip plywood ithole uhlelo lokusebenza embonini yokwakha imikhumbi emphemeni yemikhumbi yeRORO. Ipulangwe elingasheleli le-Sulong likhiqizwa ngesisekelo sepulangwe lethu le-birch. Ukuqina, ukubekezelelana okuqinile ngotape ...
Ukulethwa okusheshayo Izinyathelo Zekhonkolo Ifomu - I-Hexagon Anti-slip Film Plywood Ebhekene Nayo - SULONG
Ipulangwe eliboshwe nge-anti-skid: lisetshenziswa njengezinto zomhlabathi zezimoto zokwakha namapulatifomu okusebenza. Ngokuya ngohlobo lobuso / emuva, ingahlukaniswa ibe ngamapulangwe abushelelezi aqoshwe ngefilimu kanye nepulangwe elifakwe ifilimu. I-plywood eboshwe nge-anti-slip isetshenziswa kakhulu njengezinto zaphansi zezimoto, amaloli nezinkundla. Ngokuya ngohlobo lobuso / emuva, izinkuni ezibhekene nolwelwesi zingahlukaniswa zibe yipulangwe elibhekene nolwelwesi olubushelelezi kanye nepulangwe elibheke ulwelwesi olungasheleli. Leli plywood lodonga olungasheleli langaphandle ...
China ifilimu ngomunwe-ohlangene plywood brown brown - SULONG
Ifilimu elihlanganiswe ngomunwe libhekene ne-plywood brown - SULONG
Ukuhlolwa Kwekhwalithi Kwe-PVC formwork Yokhonkolo - I-Wire-mesh Anti-slip Film Plywood Ebhekene Nayo - SULONG
I-plywood ebhekene nomunwe engabizi kakhulu engu-4'x8'x18mm. Imininingwane eyinhloko yomkhiqizo. Usayizi: 1220mm * 2440mm, 1250mm * 2500mm, 610mm * 2440mm, 610mm * 2500mm Ubukhulu: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm. Izinto zokwenziwa kwefilimu: ifilimu ensundu, ifilimu ensundu i-Dynea, ifilimu emnyama, noma iyiphi ifilimu ye-logo, ifilimu yombala. Ukwelashwa komhlaba: isicwebezelisi esiphakeme, i-matte, okungasheleli. Okubalulekile: i-poplar, i-eucalyptus, i-poplar exubekile ne-eucalyptus, uphayini, ukuhlanganiswa komunwe. Glue: WBP-Melamine, WBP-PHENOLIC, MR. Ibanga: Ukucindezela okushisayo abathathu, ama-pressi amabili ashisayo ...
Umakhi wephepha elibhekene ne-anti-slip Film elibhekene neplywood - elingu-Negative
Ifilimu ehlanganiswe ngomunwe i-plywood brown ibhekene - i-SULONG